မမသီရိ: ကျွန်မနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ
၁ ယူသွားပါတယ် အစ်မ. နောက်မှ ပြန်လာပြီး သေချာ ဖတ်မယ်။
Monday, June 29, 2009 7:25:00 PM
Pls see my blog for H1N1 News in Myanmar.
ချစ်မမ ညီမလေးလဲ အင်္ဂလိပ် မကောင်ဘူး မမပြောသလို ပြန်ကြိုးစားရဦးမယ်
တကယ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ပြန်ရေးပြတာ လေးစားမိပါတယ်မမရေ
ခက်တာက ၅ တန်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာ စသင်ခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ လူတွေကို သူငယ်တန်းကတည်းက အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခဲ့ရတဲ့ လူငယ်တွေ လိုက်မမီကြသေးသလိုပဲဗျ
ကြီုးစားတဲ့သူတွေတော့ ကြီုးစားတဲ့ အလျောက်ပေါ့ဗျာ
Monday, June 29, 2009 11:20:00 PM
လာ မှတ်သားသွားပါတယ် မမ။
ချိုသင်းလဲ မူလတန်းစာ ပြန်ဖတ်မှပါပဲ။
မမ တော်တာတော့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး self study လုပ်လို့နေမှာပါ။ သူငယ်တန်းစာတခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူးလေ။
အစ်မပြောတာလေးတွေ သဘောကျတယ်..ကျွန်တော်တို့မှာ အခြေခံသင်ရိုးကောင်းတွေ English ကိုလေ့လာဖို့အတွက် ရှိပြီးသားပါ ။
ဒီဘက်ခေတ်မှာလည်း ဘာသာစကားလေ့လာမှုကတော့ မြန်မာပြည်မှာ နောက်မကျပါဘူး။ အခွင့်အရေးတွေ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေ အလွယ်တကူရနိုင်ပါတယ်။ (အစ်မပြောသလို ပိတ်ထားကတော့ တစ်ပိုင်းပေါ့လေ။)
ရန်ကုန် မန္တလေးနဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင် IT နဲ့ English က လေ့လာမယ်ဆို အခွင့်အရေးတွေ အများကြီးပါ ။ လုပ်ချင်စိတ်ပဲလိုပါတယ် ။
အစ်မရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုလေးတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်ဗျ..။
Tuesday, June 30, 2009 2:48:00 PM
တလောက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြန်ပြောဖြစ်ကြတာက အင်္ဂလိပ်စာသင်ခဲ့ရတာ ၁၀တန်းအထိပဲလို့။ အဲ့ဒီကနေ မတက်သေးဘူး။ အားကျတယ်မမ။ ဦးနှောက်တွေတော့ သံချေးတက်ချင်နေပါပြီ။
ကျေးဇူးပဲအစ်မ။ reportရေးရတာ အတော်စိတ်ညစ်နေတာ။
Thursday, July 02, 2009 7:17:00 PM
ကျွန်မကတော့ ငယ်ငယ်က အလယ်တန်းအဆင့်အထိ အင်္ဂလိပ်စာ သိပ်တော်တယ်။ ကြီးလာတော့မှ အင်္ဂလိပ်စာ ညံ့သွားတယ်။ နိုင်ငံခြားရောက်တော့ ပိုဆိုးသွားတယ်။ ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အားနည်းလို့ တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ကိုတောင် အင်္ဂလိပ်စာ Test ဖြေရင် ပိုက်ဆံကုန်ပြီး မအောင်မှာစိုးလို့ ဘာသာစုံ ပြန်ယူပြီး High School အဆင့် ၁၂ တန်း ပညာရေးကို ပြန်တက်လိုက်တယ်။
ကျွန်မ ငယ်ငယ်ကတော့ ၄ တန်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာ စသင်ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ စသင်တဲ့နှစ်မှာ သူငယ်တန်းကနေ ၄ တန်းအထိကို အခု သူငယ်တန်းမှာ သုံးနေတဲ့ Aa, Ant, Apple, Arrow နဲ့စတဲ့ Primary စာအုပ်နဲ့ပဲ စတယ်။ Reader 1 နေ ၆ တန်း စနစ်သစ် အင်္ဂလိပ်စာအထိ ကျွန်မအသင်ခဲ့ရဘူး။ ငါး တန်းနဲ့ ၆ တန်းမှာ စနစ်ဟောင်းက အင်္ဂလိပ်စာပဲ သင်ရတယ်။ ၇ တန်းမှာမှာ စနစ်သစ်က စာတွေ အကုန်လုံးသင်ရတယ်။ မမသီရိက ငါးတန်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာ စသင်ရတယ်ဆိုတော့ ကျွန်မထက် တနှစ်စောတယ်ထင်တယ်။
အင်္ဂလိပ်စာ အတွက် အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတရ် မမသီရိရေ...
ဘာလို့ မမသီရိကို အသိနောက်ကျရတာပါလိမ့်...
ကဗျာလေးတွေလည်း ကြိုက်တယ် ...ပုံမှန်လာလည်မယ် မမ...
Tuesday, July 14, 2009 9:52:00 AM
ကျနော့ပို့စ်လေးကနေ ထပ်မံခံစားရေးဖွဲ့ပေးတာ ကျေးဇူးပါအမ။ ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သတ်ရင် တကယ်တမ်းတော့ မြန်မာတွေက မညံ့လှဘူးဗျ။ တစ်လောက ကျနော်ဖုံးဆက်တော့ customer က မင်းမြန်မာမလားတဲ့ ဟမ် မင်းဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ မင်းတို့စကားပြောတာ တစ်ခြားလူမျိုးတွေလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ fluent ဖြစ်တယ် သွက်လက် ပီသတယ်တဲ့။ အင်းကော်လာစလေးတောင်ထောင်မိတယ်။ ကျနော့အတွက်မဟုတ်ပါဘူး လူမျိုးအတွက်ပါ။ အားနည်းတဲ့သူတွေလည်း ရှိတော့ရှိပါသေးတယ်။ ဒါလည်း မပြောရဲသေးတာဖြစ်မှာပါ။ ပြောနေမကျတော့ ချက်ချင်းပြောဖို့ ဆွံ့အနေတတ်တာမျိုးလေ။
နောက်ပိုင်းလူငယ်တွေကို အင်္ဂလိပ်စာပိုလုပ်ချင်မိတယ်. ကျောင်းတွေမှာ အလုပ်တွေမှာ Indian တွေက ပိုရှေ့ရောက်ကြတယ်။ သူတို့အင်္ဂလိပ်စာသိပ်ကောင်းတယ်။ အခက်အခဲမတွေ့တော့ ရှေ့ရောက်တာပေါ့ဗျာ။
အမပြောသလို အင်္ဂလိပ်စာတွေပိုမိုတတ်မြောက်ချင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်တိုင်က ညံ့ဖျင်းပျင်းရိလွန်းနေလို့ အင်္ဂလိပ်စာဖတ်ဖို့ ပျင်းတိုင်း ဒီပို့စ်လေးကို လာလာဖတ်ပါမယ်